Microwave buds na karọt | Ntụziaka nri
Microwaved karọt buds
Maria onyekwere | 29/05/2021 10:00 | Ihe Oyi Oyi
Ì chetara karọt microwave Kedu ihe anyị kụziiri gị ịkwadebe n'oge na-adịbeghị anya? Taa, anyị ga-eji ya ọzọ iji kwadebe a ọkụ na ume ọhụrụ Starter: Microwave buds na karọt. Nri dị mfe nke anyị ga-enye carrots anyị mara mma ọzọ.
Salads na-aghọ ndị mbido zuru oke n'oge a n'afọ. Mgbe okpomọkụ hits, ọ dịghị ihe dị ka freshness nke ụfọdụ buds na ụfọdụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ epupụta na Nchikota na ndị ọzọ. mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ịmalite nri. N'okwu a, ndepụta nke ihe ndị nwere ike ghara ịdị mfe: buds, karọt, tomato, chives na mịrị.
Naanị ihe karịrị nkeji asatọ ọ ga-ewe dozie karọt na ngwa ndakwa nri. Nkeji nke ị nwere ike iji, dị ka m mere, iji kwadebe ihe ndị ọzọ fọdụrụnụ na ejiji. Họrọ nke kacha amasị gị; M tinye nnu, ose, na mmanụ oliv na-enweghị atụ. Na-amaja ịkwadebe ya?
Ndị a microwaved karọt buds zuru okè dị ka a Starter, ìhè na-enye ume ọhụrụ iji luso ndị kacha ewu ewu ụbọchị.
Ntụziaka ụdị: Salads
Nkwadebe oge: 5 m
Nri oge: 10 m
Oge niile: 15 m
2 nnukwu karọt
1 nwa osisi
1 mkpụrụ osisi chara acha
Otutuuk lek kan̄
1 kpakpando nke butter
Anyị na-achapu carrots ma belata ya na ọkara, ma n'ogologo ma n'obosara. Emechaa anyị na-ekewa osisi ọ bụla na abụọ n'ogologo ka ha were obere oge iji sie nri.
Anyị na-etinye ha na efere miri emi ma ọ bụ tupper na anyị na-agbakwunye mmiri nke mere na ọ na-ekpuchi dum isi nke efere ma ọ bụ tupper. N'okwu m, mkpịsị aka mmiri. Mgbe ahụ, anyị na-etinye karọt na-ekpuchi ihe mkpuchi ahụ na ihe mkpuchi plastik iji were ha na ngwa ndakwa nri.
Anyị na-esi nri na ike kachasị maka nkeji 5-6 ma ọ bụ ruo mgbe karọt dị nro.
Mgbe anyị na-erite uru - mepee nwa osisi ahụ ụzọ abụọ, daisị tomato ma gbue chives. Anyị na-agwakọta abụọ ndị a ikpeazụ ma debe ngwakọta na buds ma ọ bụ ebe ọ bụla masịrị gị.
Ozugbo karọt ndị ahụ dị nro, anyị na-ekpughe ha, tinye butter na ha ma sie nri nkeji na ọrụ imi.
Anyị na-agbakwunye na salad ma mkpuru osisi karọt na mkpụrụ vaịn.
Emecha anyị nnu na ose na mmiri na mmanụ oliv buds na carrots na ngwa ndakwa nri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Inicio » Ndi ibe » Ihe Oyi Oyi » Microwaved karọt buds
Achịcha e ghere eghe n'ụkpụrụ aubergines